हेल्थ टिप्स – Page 19 – Lokpati.com
केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अमेरिका प्रचण्ड मृत्यु पक्राउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड चितवन नेकपा सरकार नेपाली काँग्रेस नेपाल प्रहरी अपराध राशिफल
उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न लसुन खानुहोस्
काठमाडौं। लसुन स्वाद र स्वास्थ्यका हिसावले निकै लाभकारी मानिन्छ। आयुर्वेदमा समेत लसुनको फाइदाबारे चर्चा गरिएको पाउन सकिन्छ। लसुन सामान्य रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको भएपनि खाली पेटमा लसुन खानुका विभिन्न फाइदा रहेका छन्। यस्ता छन् फाइदा बिहान…
जाडो समयमा गर्भवती महिलाले यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
काठमाडौं। गर्भावस्था आफैंमा एउटा जटिल अनि विशेष अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा आमा बन्ने खुसी मात्र जोडिएको हुँदैन, गर्भसँग सामाजिक, पारिवारिक तथा आत्मीय सम्बन्ध पनि हुन्छ । गर्भावस्था महिलाहरूको नारी र नारीत्व झल्काउने जीवनको एउटा महत्वपूर्ण…
कस्तो अवस्थामा रक्तदान गर्नुहुँदैन ?
एजेन्सी। हामीले सुन्ने गरेका छौं, रक्तदान जीवनदान। रक्तदान गर्नु पुण्यको काम हो। किनभने हामीले दिएको रगतबाट कसैले जीवन पाउँछ। हामीलाई थाहा भएको यत्ति हो। रक्तदान गर्नाले अन्य व्यक्तिको जीवनमात्र बच्दैन, रक्तदान गर्ने व्यक्तिको शरीर समेत…
चुरोट सेवनले महिलामा हुने १० खतरा
एजेन्सी। धुम्रपान हरेक मानिसको स्वास्थ्यको लागि खतरायुक्त हुन्छ। तर, एउटा अध्ययनले महिलाको स्वास्थ्यमा धुम्रपानले धेरै असर गर्ने देखाएको छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै चुरोट सेवन गर्ने महिलाको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ। भविष्यमा महिलालाई धुम्रपान…
पार्टनरको असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन गर्ने ?
दम्पतीको यौन जीवनमा यस्ता अनेकन गुनासोहरु सुनिन्छ। असन्तुष्टिले नै पती-पत्नीमा मनमुटाव ल्याउने हो। भ्रम पैदा गर्ने हो।
पानीमा नुन मिसाएर नुहाए हट्छ अनिद्रा
काठमाडौं। तपाईहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। नुनले मानिसहरुको खाना स्वादिष्ट मात्र नभई स्वास्थ्य समस्यासमेत हटाउँछ। मानव स्वास्थ्यमा नुन यतिसम्म महत्वपूर्ण छ की केही दिन नखाँदा रगतमा सोडियमको मात्रा घट्छ र अस्वास्थ बनाउँछ। के तपाईहरुलाई थाहा…
कुर्कुच्चा फुट्न नदिन यसो गर्नुहोस्
यदि तपाईको खुट्टाको कुर्कुच्चा फुटेको छ भने त्यसले तपाईंको चिन्ता बढाउँछ। यो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि महिलाहरु विभिन्न उपायहरु अपनाउने गर्छन्। विभिन्न क्रिम र लोसन लगाउने गर्छन्। तर, त्यस्ता क्रिमले कुनै असर गर्दैन। कुर्कुच्चा सफा…
मुटु सम्बन्धी चार रोचक तथ्य
काठमाडौं। जीवको प्राण हो मुटु। मुटु मानव लगायत भर्टेब्रेट (ढाड भएका) प्राणीहरूको शरीरको एक अङ्ग हो। यस अङ्ग शरीरको रक्त सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। मुटु मानव तथा अन्य जनावरमा भएको पेशी अंग हो, जसले रक्तनली मार्फत सञ्चार प्रणालीमा रगत…
तपाईलाई पिनास भएको छ ? यसरी गर्नुस् घरेलु उपचार
काठमाडौं। पिनास भनेको नाकको भित्री भागमा रहेका खाली ठाउँमा अवरोध भएर श्वास प्रश्वासमा बाधा पुर्‍याउने एक किसिमको रोग हो। जसलाई ‘साइनोसाइटिस’ पनि भनिन्छ। साइनोसाइटिस साइनस sinus हरुको इन्फ्लामेसन (जलन) हो। साइनस भन्नाले टाउको र…
शरिर तातो राख्न यी १५ खाद्य पदार्थ खानुहोस्
काठमाडौं। मौसमी परिवर्तनसँगै हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ। जाडो मौसममा उच्च रक्तचाप, युरिक एसिड, दम आदिका रोगीले निकै सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । जाडो मौसममा मानिसहरु शरीलाई न्यायो पार्न धेरै प्रकारका तातो परीकारहरु…
शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तनको संकेत, यी हुन् मस्यौदाका २९ नयाँ…
तलव भीख होइन, बौद्धिक श्रमको मूल्य हो (तलव बढाउनैपर्ने १६ कारण)
विश्वप्रख्यात ३० व्यक्ति : ‘जाे बालकमा काेही मन्दवुद्धि, काेही गरीब…
खस-आर्यको ३८०० वर्ष लामो इतिहास
यी थिए जनयुद्धको घोषणा गर्ने १९ केन्द्रीय सदस्य